Report Kraken Daily Market for 01.06.2018
$128M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Huobi in aan bilowno ETF crypto
madal ganacsiga Cryptocurrency Huobi waxaa bilaabay fund crypto ku salaysan sarrifka-baayacmushtari ah (ETF), Doorashadan maalgelin ah oo u oggolaan doonaa maalgashadayaasha tafaariiqda in ay helaan gaadhista dambiil ah hantida halkii hal mar.
qalab maalgelinta, loo yaqaan HB10, haatan u furan yahay Macmiil oo aqbala kaliya iibsadaan isticmaalaya cryptocurrencies, halkii lacagaha Fiat.
Shirkadda intaa ku daray in tan iyo alaabta kale oo laga heli karo maal hay'adaha doonaa, waxa laga yaabo inay waayeen “yareeyo saamaynta ee laga soo galo hay'adaha iyo ka bixitaanka” on cryptocurrencies hal.
Siibtey bilawday app mobile kuu oggolaanaysa in isagana ka kasban Seeraar
Shirkadda technology Japanese siibtey Internet Group ayaa sameeyay app mobile cusub kuu oggolaanaysa in dadka isticmaala kasban Seeraar si fudud u ciyaartid ciyaaraha.
app cusub - yeedhay CryptoChips - markii hore la dhexgelin doono la-waqtiga dhabta ah ciyaar dagaal dhuleed sidoo kale ay soo saareen siibtey yeedhay “Whimsical War.”
Rafaa casriga ah ayaa sheegay in rajada waa in la dhiiri dadweynaha in ay bartaan cryptocurrencies via app cusub, tan dadka isticmaala waxay u baahan doonaan in la isticmaalo boorsada ay digital gaar ah si ay u helaan oo ay isticmaalaan Seeraar.
Singapore ganacsadaha iibsada sarrifka ruqsada crypto Japan $ 67M
Eric Cheng, ganacsade ah hantida maguurtada ah guul, ayaa helay a 100% saamiga ee Japan FX FSA-shati Trade Financial Co., Ltd, madal ganacsiga FX ah, iyo sidoo kale BitTrade, madal ganacsiga cryptocurrency shati xarunteeduna tahay magaalada Japan.
Uu damacsan yahay inuu Colnimo u qaaddo madal ganacsi galay ugu weyn ee Japan & laga yaabo inay kordhiso adeegyada adduunka.
Eric Cheng shisheeye ugu horeysay in ay leedahay noqdo 100% Dano boosteejo ah oo Japanese FSA-shati ganacsi cryptocurrency
korodhka Square ee qiimaha by $ 8B tan ku daray Seeraar ganacsi sanadkii la soo dhaafay
Saamiyada of Square Inc. ayaa ka badan labanlaab qiimaha lagu jiro sanadkii la soo dhaafay.
stock adag bixinta ayaa hirkii by dhow 50%, isagoo intaa ku daray oo ku saabsan $8 billion in qiimaha suuqa, tan iyo markii ay soo giringiriyey soo baxay Seeraar ganacsiga ee November macaamiisha ay Cash App, taas oo kuu ogolaanaysaa dadka isticmaala lacag lagu wareejiyo si saaxiibada iyo qoyska.
rasmi IMF oo ku baaqay in bangiyada dhexe si ay ula tartamaan cryptocurrencies
Sarkaal ka tirsan sare ee Hay'adda Lacagta Adduunka (IMF) waxaa ku boorriyay bangiyada dhexe si ay u horumariyaan "fiican" lacagaha Fiat si ay u ilaaliyaan oo ay xawaaraha hoggaanka badan cryptocurrency.
agaasime ku-xigeenka IMF Dong wuxuu ka dhigaa kiiska in "hantida crypto maalin maalmaha ka mid waxaa laga yaabaa in la yareeyo baahida loo qabo lacag bangiga dhexe" iyo in hay'adaha dawladda waa in ka badan sameeyo si aan u ogolaaneynin in dhici. In si kale loo dhigo, si "looga hortago cadaadis tartanka hantida crypto isticmaali karaa lacagaha Fiat,"Bangiyada dhexe u baahan in ay qaataan qaar ka mid ah fikradaha ugu muhiimsan wadista hantida digital.
$524M MA xaday ...
amor ayaa sheegay in: